၃ နယုန် 2020
၂၇ တပိုတွဲ့ 2020
၁၆ ပြာသို 2019
The plan for developing French education abroad has four main thrusts :
Making teaching and education options more attractive ;
Developing the current network and supporting the creation of new schools ;
Getting families more involved in school life ;
Supporting the network in working for diplomacy more (...)
၁ တန်ဆောင်မုန်း 2019
Applications are now open for the 2019 “Liberty, Equality, Fraternity” Human Rights Prize of the French Republic, awarded by the Prime Minister of the French Government.
Candidates must submit their complete application, before the deadline of 14 October 2019.
၂၂ mai 2019
In the Christchurch Call to Action, 10 Heads of State and Government and international organizations, as well as leaders of major tech companies, have committed toaset of collective actions that aim to eliminate terrorist and violent extremist content online.
ု့102 ပြည်ထောင်စုရိပ်သာလမ်း၊ ရန်ကုန်မြိူ့
ဖုန်း [+ 00-95-1] 8 212-520
၂၀၂၀ ခုနှဈ ပွငျသဈသံရုံးပိတျရကျမြား
ဗုဒ်ဓဟူးနေ့၊ဖဖေျောဝါရီလ (၁၂) ရကျ - ပွညျထောငျစုနတှေ့ငျ သံရုံးပိတျပါသညျ။
Download this font in case display problem
၁၈ နယုန် 2020
COVID-19 ကူးစကျရောဂါနှငျ့ဆကျစပျနသေော ကနျြးမာရေးပွသနာအကပျြအတညျးမြားအရ ရနျကုနျရှိ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာပွငျသဈသံရုံးသညျ ပွငျသဈပွညျဝငျခှငျ့ဗီဇာ ထုတျပေးခွငျးကို ထပျမံအသိပေးကွညောခကျြမပေးခငျအထိ ဆိုငျးငံ့လိုကျပါသညျ။
၁၇ နယုန် 2020
၁၇ တော်သလင်း 2019
ဂီတပွဲတော် ၂၀၁၉ - ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးမြို့တွင်း နေရာအနှံ့အပြားတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည့် အခမဲ့ (...)
ဂီတပွဲတော် သို့မဟုတ် ဂီတနေ့ (La Fête de la Musique) ဟာ ရန်ကုန်မြို့ကို တတိယအကြိမ်မြောက် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ယခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့ မန္တလေးမြို့မှာပါ ပထဆုံးအကြိမ်အနေဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာ (...)
၆ တော်သလင်း 2019
ရေအားလျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံ (၅) ရုံကို ပြင်ဆင်မွမ်းမံသည့်စီမံကိန်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင်လျှပ်စစ်မီးပျက်တောက်မှုများကြုံတွေ့နေရသောကြောင့် လွှတ်တော်အမတ်များက ပြင်သစ်ဖွံဖြိုးရေးအေဂျင်စီ(AFD)မှပံ့ပိုးသော ချေးငွေယူရို၃၅.၇သန်းဖြင့် ပြုလုပ်မည့် စီမံကိန်းတစ်ခုကို လွတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး၊ (...)
၂၄ ဝါဆို 2019
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး Mr. Christian Lechervy ရန်ကုန်မြို့ရှိ့ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌ
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး Mr. Christian Lechervy ၊ ပြင်သစ်သံရုံး နှင့် ပြင်သစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ (AFD) တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် Merieux Foundation တို့ ရန်ကုန်မြို့ရှိ့ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနသို့ ယနေ့ ၂၃ရက်၊ (...)
Important notice to all visa applicants: online appointment scheduling
Starting March 15th 2015, it will be mandatory for every visa applicant to request an appointment in order to submitavisa application at the Visa Section of the Embassy of France
၃ တပိုတွဲ့ 2020
၃၁ ပြာသို 2020
၃၀ ပြာသို 2020
Daw Aung San Suu Kyi, Commandeur de la Légion d’Honneur
Remise des insignes de Chevalier des Arts et Lettres à l’actrice Grace Swe Zin Htaik
L’atrice Grace Swe Zin Htaik, Chevalier dans l’ordre des Arts et Lettres
Remise des insignes de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite à M. Win Maw, Président de Forever Group
Remise des insignes de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite à M. Guy Lubeigt, enseignant et chercheur
Entretien de Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, avec Aung San Suu Kyi, conseillère pour l’Etat et ministre des affaires étrangères, le 20 novembre 2017 à Nay Pyi Taw
Visite de l’ambassadeur de France dans un camp de déplacés de Jan Maing Kawng, près de Myitkyina (Etat Kachin)
Remise de la médaille d’Honneur des Affaires étrangères à Daniel Toe Myint Naing
Formation aux techniques de sauvetage en faveur des sapeurs-pompiers birmans
Mission sur le développement urbain à Mandalay
Réunion de travail dans le cadre d’une mission à Taunggyi avec une délégation d’entreprises françaises